25+ Farewell Quotes maka Friend | Ka ọ dị Quotes 25+ Farewell Quotes maka Friend | Ka ọ dị Quotes
Farewell bụ ihe kasị ike ihe na-asị onye ọ bụla. Bond n'otu mgbe ahụ na mberede, otu ụbọchị ị na-jụrụ ikwu Goodbye enyi gị, onyeisi, ụlọ ọrụ, ezinụlọ na ihe agaghị. Anyị na-na ekemende 25 Farewell ruturu maka na enyi, ezinụlọ, onyeisi, ibe maka gị ịkọrọ na-ekwe ha goodbye on a mma dee.
Farewell bụ ndị siri ike ma ọ bụ amanyere bụ iwu nke. Ka-esi na Farewell ruturu maka onyeisi na ijeoma ruturu maka na mahadum.
Farewell Quotes maka Friend
"Ka m na hụrụ kpakpando ututu ahu rigota n'elu ugwu, M ghọtara na ndụ bụ nanị a collection of echeta. Ma na-echeta dị ka starlight - ha na-na ruo mgbe ebighị ebi. "
Farewell Quotes maka onyeisi
"Unu na-eti mkpu n'ihi na ọ bụ n'elu. Ọchị n'ihi na ọ mere. "
Farewell Quotes maka Friends
"The akụkọ nke ndụ bụ quicker karịa ntabi anya, akụkọ nke ịhụnanya bụ hello, Ka ọ dị."
Farewell Quotes maka Family
"Ọ bụrụgodị na ị ma ihe ọ chọrọ, ị dịghị mgbe a kwadebere maka otú o si ele. "
Farewell Quotes maka Company
"Anyị kwesịrị ikwu goodbye ka omenala usoro nke ụlọọrụ mahadum." - Marcus Buckingham
Farewell Quotes maka ọrụ ibe
"Kwa nzukọ mere ka a ikpeazụ, n'ihi ya, ọ ga-, dị ka ogologo oge ndụ puru inwu anwu. Na nzukọ ọ bụla, e nwere ụfọdụ n'ime ihe mwute nke nwere ngalaba, kama n'ihe niile, partying e ụfọdụ n'ime ọṅụ nzute nakwa. "
Farewell Quotes maka ndị agadi
"Mgbe kasị mma enyi na-ekwu goodbye ka onye ọ bụla ọzọ, ihe ha na-ekwu n'ezie bụ 'Jide na echiche, M ga-azụ n'oge na-adịghị 'N'ihi ya, m ga-echiche m ruo mgbe ị laghachiri anụ ndị ọzọ. "
Farewell Quotes maka ụmụ akwụkwọ
"Otu ụbọchị na oge, nke a bụ ezuru. -Adịghị anya azụ na mwute n'ihi na n'oge gara aga n'ihi na ọ bụ eb ine. Atụla nsogbu banyere ọdịnihu, n'ihi na ọ nwere na-abịa. -Ebi ugbu a nakwa ime ka ọ mara nnọọ mma nke na ọ ga-uru na-echeta. "
Unu n'anya nne na nna na-akwanyere ha ịhụnanya na-elekọta, n'ihi na ị ga-naanị mara na ha bara uru mgbe ị na-ahụ ha efu oche.
Ka ọ dị Quotes
"Amụtawo m na goodbyes ga na-afụ ụfụ, foto ga-eji dochie ịnọ n'ebe, ekele bụ a na-enweghị ume okwu, echeta echefu ike, okwu nwere ike mgbe dochie mmetụta, na ndị dike na-aga unsung. "
nọrọ nke Quote
Ezi nọrọ nke ruturu
"Anyị na-na na azụ ọnụ ọzọ, na m na-agaghị agbarapụ ida gị dị ka enyi. "» indigo Girls
nọrọ nke Quotes
"Man otú obi na-mgbe purest na kasị egbuke na hour nzute na nke gaa nke ọma." »Jean Paul Richter
Anyị na-atụ gị obi ụtọ anyị oké collection of gaa nke ọma ruturu na a ga-abịa azụ inyocha ihe ruturu n'ọdịnihu. Farewell ruturu maka isi na Farewell Quotes maka na enyi na-kacha na ina.
Ezi Farewell Quotes
"Ọ bụ na-akpa ọchị. N'agbanyeghị otú ike na ị na-agbalị, ị gaghị na-emechi obi gị ruo mgbe ebighị ebi. Na nkeji ị na-emeghe ya, gị mgbe ihe na-aga na-abịa na. Ma mgbe ọ na-eme, ị na dị nnọọ wee na-aga n'ihi na ọ, eme ka ọ bụrụ na ị, ọ baghị uru na ebe a. "» Kirstie uzo warawara na "Toothless"
Funny Farewell Quotes maka enyi
"Ya mere,, ndị enyi, ugbu a, ọ bụ oge na-amalite na-eto eto, ewere ụgwọ, ebe obu ihe dị ka ha na-, ihu eziokwu, ọ bụghị n'ịgbanahụ ha, ka nrọ, dị nnọọ reshaping ha, -eto eto. "» Stephen Sondheim
"Ụfọdụ ndị na-abịa n'ime ndụ anyị na ngwa ngwa. Ụfọdụ na ọnụnọ nke a mgbe, ahapụ n'akara on obi anyị, na anyị bụ ndị dịghị mgbe, mgbe otu. "» Flavia Weedn
"Anyị maara onye ọ bụla ọzọ anyị dum ndụ na ugbu a anyị ga-aga anyị n'ebe dịgasị iche. Ụfọdụ ga-echeta na ụfọdụ ga-echefu onye ọ bụla ọzọ, ma anyị ga na-a akụkụ nke ọ bụla ọzọ n'ime anyị. "
"E nweghị ndị na goodbyes anyị. N'ebe ọ bụla ị na-, ị ga-enwe mgbe nile na obi m. "» Mahatma Gandhi
Lelee: Obi ụtọ na Birthday Quotes
Mbikọ Farewell Quotes
"Apụghị m icheta niile ugboro agwara m onwe m ịnọgide na oge a na dị ka ha gafere." »Nguko Crows
"Farewell! Chineke maara mgbe anyị ga-ahụ ọzọ. "» William Shakespeare
Ka ọ dị Quote New
"The abụọ hardest ihe-ekwu ná ndụ bụ hello na nke mbụ na goodbye n'ihi na nke ikpeazụ."
Quote maka Farewell
"History mgbe n'ezie na-ekwu goodbye. History na-ekwu,, 'Lee, gị emechaa.' "- Eduardo Galeano
Ị nwere ike hụrụ ha n'anya, agbaghara ha, chọrọ emere ha ihe ọma ... ma ka na ịga na na-enweghị ka ha. Jisie gị gaa nke ọma ndị mmadụ! Farewell ruturu maka enyi na ijeoma ruturu maka onyeisi na-na-emekarị na kwesịrị iwere kpọrọ ihe nke ukwuu.
Tags: Ka ọ dị ruturu, Farewell Quotes maka Friend